ငြိမ်းချမ်းအေး – စနစ်ဆိုး ရဲ့ ဖင်ပေါ်ခံ သားကောင်များ | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းအေး – စနစ်ဆိုး ရဲ့ ဖင်ပေါ်ခံ သားကောင်များ
ကာရာအိုကေ စင်တင်၊ အနှိပ်ခန်း၊ သင်္ကြန် စီးပွား ကြော်ငြာ စင်မြင့် ထက်က အမျိုးသမီး ငယ် ဖြစ်ဖြစ်၊ လူသား သိက္ခာ၊ အခွင့် အရေး၊ လွတ်လပ်မှု ကို မျက်ကွယ်ပြု တိုင်းတပါး မှာ၊ မွေးရပ်မြေမှာ “ငါတို့က ပညာနဲ့ ဝမ်းစာရှာတာကွ” ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာ အားတင်း ဆိုရတဲ့ ပညာတတ် လူတန်းစား ဖြစ်ဖြစ်၊ အရောင်း၊ အဝယ် စီးပွားလုပ်ကိုင် ရှာစားရတဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား ဖြစ်ဖြစ်၊ ခိုးစားမှ နပ်မှန်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အခြေခံ အလုပ်သမား လူတန်းစား ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူအများစု ဟာ စနစ်ဆိုး က ထုဆစ် သွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ အကျင့်၊ စာရိတ္တ၊ လူ့ ဂုဏ် သိက္ခာ၊ လွတ်လပ် တရားမျှတမှု ပဲ့ရွဲ့ နေတဲ့ ဒင်္ဂါပြား တချပ် ရဲ့ ကျောချင်းကပ် မျက်နှာစာ နှစ်ဖက်၊ ခေါင်း နဲ့ ပန်း အတူတူ သာ ဖြစ်တယ်။
4 Responses to ငြိမ်းချမ်းအေး – စနစ်ဆိုး ရဲ့ ဖင်ပေါ်ခံ သားကောင်များ
Thet Naing on April 15, 2014 at 4:51 am
ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ စောစောကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ ဆရာကြီးလေသံနဲ့ ပြောတာမဟုတ်။ အားပေးတာပါ။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မျက်စိကြီး နားကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ စတဲ့စတဲ့သူတွေ တော်တော်များများဟာ တလွဲချည်းတွေပဲ။ ကျနော်တော့ ဟိရီသြတ္တပ္ပဆိုတဲ့ လောကပါလတရားနဲ့အညီ (ကိုယ်တိုင် အပြည့်အ၀ မကျင့်သုံးနိုင်တောင်) နေထိုင်တာကိုပဲ သဘောကျတယ်။ ဘယ်အယူဝါဒ၊ ဘယ်ပညာရပ်၊ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဓလေ့ထုံးတမ်းဖြစ်ဖြစ် အမြဲတမ်း ကူးလူးဆက်ဆံ ပြောင်လဲနေတာ သဘာဝပဲ။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီး အော်နေမော်နေတဲ့ လူတွေက ကိုယ်အလေ့အထနဲ့ စိမ်းနေသေးတဲ့ အရာတွေကိုကြည့်ပြီး တောပြောတောင်ပြော လုပ်နေကြတာ။ နှစ်တစ်ရာ၊ နှစ်ရာ ကြာသွားတော့မှ ဒါငါတို့ယဉ်ကျေးမှု လုပ်ချင်ကြတာ။ အခုကျနော်တို့ ၀တ်နေတဲ့ အ၀တ်အစား၊ အစားအစာ၊ သင်ယူနေတဲ့ ပညာတွေ၊ ဂီတ၊ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ စတာတွေကို ဘယ်အနှီပညာရှိက ကိုယ့်ဟာအစစ်ပါလို့ ပြောရဲလဲ။ ကျောက်ခေတ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေ စာတစ်အုပ်ရေးစေချင်ပါတယ်။ ဒေါသနည်းရင် ပိုကောင်းမှာပါ(ကျနော် အပါအ၀င်ပါ)။ ကိုယ့်အယူအဆက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု ရှိနေရင်တောင် ရေးတဲ့စာက ဒေါသပါနေရင် လက်မခံခခချင်တတ်ကြလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
kyawkyar on April 15, 2014 at 7:40 am
Nyein Chan Aye ..
There are obviously two great authors in MoeMakha…as far as I concerned . ….Nyein Chan Aye and Than Win Hlaing .
I like your article here. There are various kinds of readers. Perhaps you may like to write so that ‘ basic grassroots laymen can understand ‘ even in own Mother language of Myanmar. Try to putaparagraph in simple Myanmar amidst decorative Myanmar Language writing.
The mainstay of writing is to attract more readers. Or . ‘ Yay kar Yay eat, Phat thu ma Sheet ‘ . Then the objective of writing these articles will be ‘ in vain ‘ . Thanks.
Zawtika on April 15, 2014 at 11:43 am
ဟုတ်သလိုလို နဲ့ နဲနဲ လွဲနေတယ်
catwoman on April 17, 2014 at 3:34 am
I agree. people cannot see the way you see or think critically because they dont teach you to think like that in school. But you need to tone downabit b/c it sounds like you re way too angry.